अहा याङ्जाकोट ! कुँदियो अक्षरमा - Samadhan News
अहा याङ्जाकोट ! कुँदियो अक्षरमा
समाधान संवाददाता २०७६ साउन २१ गते १४:२१
वरिपरि साउने झरीले रुझाएका हरिया डाँडा । हरियै छ, खेतबारी र वन । वनको बीचमा पुराना शैलीका घर । ढुंगाले छाएको घर र ढुंगै बिछ्याइएका आकर्षक सिँढी र बाटो । होमस्टे चलाएर गाउँ पुग्ने पाहुनालाई गाउँलेको न्यानो स्वागत । गाउँमै फलेको काक्रो । खानेलाई गाउँकै लोकल भाले । नखानेलाई गाउँकै उब्जिएको साग र तरकारी ।
कुहिरो छल्दै झुल्किएको बिहानी घाम । त्यसैमा टिलिक्क टल्किएको हिमाल । गर्मी मौसममा शितल छर्दै बहेको हावा र अक्षरमा जीवन र जगतको यथार्थ उतार्न पुगेका यात्री । अनि त अक्षरयात्री अम्बिकाप्रसाद भट्टराईले आफ्नो अनुभूतिलाई शब्दमा यसरी उतारिहालेः
याङ्जाकोटको सम्झना मलाई
मेटिँदैन आगोले नजलाई
पोखरादेखि अक्षरसँग यात्रा गर्न याङ्जा पुगेका अक्षरयात्रीले याङ्जाकोटलाई शब्दमा उतारे । याङ्जाकोटको इतिहास खोतले । याङ्जाकोट जस्ता ऐतिहासिक गाउँ रित्तिँदै जाँदाका दुखहरु शब्दमा लिपिवद्ध गरे । याङजाकोटको डाँडाबाट देशको राजनीतिक अवस्था नियाले । राज्यसत्ता र त्यसको बागडोर सम्हालेकाहरुमा आएको विचलनप्रति व्यंग्य गरे । अक्षरयात्रीले विभिन्न क्षेत्र र आयामलाई शब्दमा खिपे ।
ट्वाइलेटमा कमोड राखेर
कोदोको रोटी चबाउँदैछिन् साहिली भाउजू
गाउँमा सहर, गाउँलेहरुका लागि पसेको छैन
कवि सुदर्शन पौडेलले कवितामार्फत गाउँ पसेको सहर संस्कृतिलाई कवितामार्फत सुनाए । एकाबिहानै याङ्जाकोट गाउँभरि शब्द खोज्न छरिएका अक्षरयात्रीसँग फर्कंदा आआफ्नो विचार, चिन्तन र दृष्टिकोण अनुसारको आर्गानिक सिर्जना थिए । अनि सुनाएँ, याङ्जाकोटलाई साक्षी राखेर याङ्जाकोटमै उनिएका शब्दः
मान्छेसँग मान्छेको विश्वास मूल फुट्नेछ
एक दिन यस्तो आउनेछ
लयको गीत आउनेछ
मान्छेहरु निराशावादी हुँदै गएको कवि तीर्थ श्रेष्ठले कवितामार्फत इंगित गरे । उनले देशमा व्यस्त नैराश्यता छाएप्रति चिन्ता व्यक्त गरेनन्, आशा राख्न आग्रह गरे । अर्का कवि किरण थापाले सुविधाभोगी जनप्रतिलाई कवितामार्फत व्यंग्य गरे । कवि धनप्रसाद तामाङले ऐतिहासिक याङ्जाकोट गाउँको इतिहास खोतले ।
किन बल्झिरहन्छ घाँटू
तामाङले याङ्जाकोटको घाँटु, सोरठी, दरबारको संरक्षण र संस्कृति तथा पहिचानको खोजी गर्न कवितामार्फत आह्वान गरे । कलाकार प्रकाश घिमिरे याङ्जाकोट पुगेर ठट्यौली पारामा गम्भीर विषयमा घोत्लिए । कवि चैतन्य अधिकारी र गीता तिवारीले प्रकृति र गाउँको कथा कवितामा उतारे ।
कवि प्रकाश ज्ञवालीले कवितामार्फत च्यूत हुँदै गएको राज्यसत्ताको विवेकप्रति प्रश्न गरे । कपिल शर्माले गजलमार्फत खिचातानी र स्वार्थी प्रवृतिप्रति तारो लगाए ।
कवि दीपक सिञ्जालीले गाउँ पसिरहेको डोजर र गाउँको चित्रण कवितामार्फत बोले । कवि सौगात पोखरेल, भीम रानाभाट र उदीपराज ढुंगानाले गाउँबाट हराउँदै गउको गाउँ र समसामयिक विषयमाथि सिजर्नामार्फत चिन्ता व्यक्त गरे । कवि बालिका अभिलासीले गाउँले जीवन, अर्गानिक स्वाद र स्वागतलाई कवितामा उतारिन् । आनन्द भट्टराईले सामाजिक विषयवस्तुलाई गजलका शेरमा उतारे ।
केहीले याङ्जाकोट पुगेर शब्दमा प्रणय र पे्रमको स्वाद मिसाए । याङ्जाकोट पुगेपछि अनिता दाहालले कुनै प्रेमीसँग भएको कल्पना गरिन् । मुक्तकमार्फत यसरी मायाप्रेम लगाउने रहर देखाइन् ।
प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार पोखरामै यस्तै एउटा यात्रा हुन्छ, अक्षरयात्रा । गजल सन्ध्या पोखरा र नवनीति साहित्य सागरले यो अक्षरयात्रा अभियान चलाउँदै आएका छन् । ‘कम्तीमा महिलाको १ दिन पोखराको एउटा साहित्यिक अभियान कुनै गाउँसम्म पुग्छ । ऐतिहासिक र सम्भावना बोकेका विभिन्न ठाउँमा पुग्छ । जीवन र जगतलाई शब्दहरुमा उतार्छ,’ सन्ध्याका अध्यक्ष अमृत सुवेदीले भने, ‘अक्षरयात्रीले कुनै ठाउँमा उजागरमात्रै गरेका छैनन् । शब्दमार्फत दस्तावेजीकरण र साहित्यिक पर्यटनमा पनि ठूलो सहयोग पुर्‍याएको छ ।’
‘जीवन र जगतको यथार्थ वोधका लागि अक्षरयात्रा’ नाम दिएर गजल सन्ध्या र नवनीत सागरले चलाउँदै आएको अभियानको १ सय ६८ औं शृंखला याङ्जाकोट होमस्टे पुगेको सचिव वसन्त विनोद बताउँछन् । अन्नपूर्ण संरक्षण व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नारायण गुरुङले कविका अक्षरमा याङ्जाकोट अझ जीवन्त बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अक्षरयात्रामा ३० जना साहित्यकार सहभागी भए । यस पटकको अक्षरयात्राको व्यवस्थापन मादी गाउँपालिका र प्रवद्र्धन पर्यटन बोर्ड पोखराले गरेका हुन् ।